Daaweynta Proton ee Daaweynta Kansarka Prostate-ka California Proton
Daaweynta Kansarka Qanjirka 'Proton Therapy'
La dagaallama kansarka qanjirka 'Procate Precision'
Agaasimaha Protons ee California, Carl Rossi, MD, ayaa si caalami ah loogu aqoonsaday daaweynta shaqsi ahaan in kabadan 10,000 oo bukaannada kansarka qanjirka 'prostate' ah oo leh daaweynta shucaaca proton-ka 26-kii sano ee la soo dhaafay — waana in ka badan dhakhaatiirta kale ee adduunka.
Marka loo barbar dhigo daaweynta daweynta ee loo yaqaan 'proton therapy treatment-treatment' ee dawaynta taranka, teknoolajiyada baarista qalin-kayga ayaa si sax ah u siisa daaweynta shucaaca proton ee kansarka qanjirka 'prostate' oo leh saxnaan aan dhameystirnayn iyo daryeelka ugu weyn. Waxay awood u siisaa dhakhaatiirtayada inay weeraraan burooyinka qanjirka 'prostate', lakab-lakab, oo leh shucaac aad u sareeya isla markaana yareeya soo-gaadhista meelaha aan cudurka lahayn. Tani waxay muhiim u tahay bukaanka kansarka qanjirka 'prostate' oo laga yaabo inay la kulmaan halista unugyada erectile, heerarka testosterone oo hoos u dhaca, dhibaatooyinka kaadida iyo malawadka iyo xanuunnada caloosha oo ay ugu wacan tahay shucaac. Yaraynta sunta shucaaca la xiriirta waxay sidoo kale kordhineysaa suuragalnimada in bukaanku ku dhammaystiri karaan daaweyn kala go ’yar ama dib u dhac ah.
Daaweynta Proton ee Dhirta
Kansarka qanjirka 'prostate mar hore'
Kansarka qanjirka ragga oo horumarsan (Marxaladda III iyo IV)
Xaaladaha qaarkood ee kansarka metastatic
Ka ilaali unugyada caafimaad qabta, malawadkaaga, kaadiheystaada iyo mindhicirkaaga
Yaree waxyeelada, oo ay ku jiraan heerarka testosterone hoos udhaca, dhibaatooyinka kaadida iyo malawadka, iyo xanuunada caloosha.
SpaceOAR® Hydrogel - Kala soocida Amarada Khatarta
Si loo yareeyo shucaaca aan loo baahnayn, waxyeelooyinka aan loo baahnayn iyo dhaawaca suuragalka ah ee malawadka inta lagu jiro daaweynta kansarka qanjirka 'prostate' iyo xaalado kale oo gaar ah, waxaan siinnaa bukaanka ikhtiyaarka hydrogel. California Protons waxay hadda bixisaa hanaankan duubeysan ee ugu yar ee lagu durayo hydrogel xaruntayada. Marka meel la joogo, sida caadiga ah lama dareemi karo waxayna u shaqaysaa sidii buufis 1.3cm ah1 si malawadka looga fogeeyo qanjirka 'prostate'. Weheliyuhu wuxuu sii joogi doonaa muddo saddex bilood ah ka hor inta aan si buuxda loo nuugin oo si dabiici ah looga siinin kaadidaada.
Heerka guusha nidaamka2
Dhacdooyinka aaladda xun2
Faa'iidooyinka Daaweynta Proton ee Kansarka Qanjirka
Tiknoolajiyadda baarista qalin-jabinta ayaa si sax ah u xakameysa protons-ka si meesha ugu sarreysa loo yaqaan 'Bragg peak' - oo ah meesha ay ku keydiyaan quwaddooda ugu badan - si toos ah burooyinka qanjirka 'prostate'. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan daaweyno qaababka burooyinka ee isku murugsan iyo kala duwanaanta qaddarka burada dhexdeeda.
Daaweynta hormoonka ah ee loo yaqaan 'proton therapy' waxay u oggolaaneysaa dhakhaatiirta inay si xushmad leh u gaarsiiyaan shucaac heer sare ah unugyada qanjirka 'prostate', waxayna yareeyaan qiyaasta unugyada caafimaadka qaba iyo xubnaha muhiimka ah. Xaaladaha qaarkood, tan ayaa la muujiyey inay bixiso heerar daawo oo ka sarreeya daaweynta shucaaca raajada xitaa xaaladaha ugu adag qaarkood. Hal daraasad, boqolkiiba 97 ee 4,000 bukaan-socodka daaweynta bukaanka ayaan la kulmin soo noqnoqod; qaar badan oo ka mid ah bukaannada aan kansarka lahayn waxay dhammaystireen daaweynta illaa 10 sano ka hor.3
Dhibaatooyinka soo raaca ee daaweynta kansarka qanjirka 'prostate' oo aan saameyn ku yeelan heerarka testosterone. Daraasad 2013 ah laguma helin wax isbeddel ah oo ku yimid heerarka testosterone ee bukaanka kansarka qanjirka 'prostate' ee hooseeya iyo kuwa dhexeba.4 Daraasad kale ayaa si aad ah uga hooseysa soo-gaadhista shucaaca malawadka iyo kaadiheysta ee daaweynta proton marka loo eego shucaaca raajada, taas oo la muujiyey inay yareyneyso fursadaha ay ku dhici karaan dhibaatooyinka kaadi mareenka iyo mindhicirka.5
Waqtiga daaweynta kansarka qanjirka 'prostate' oo gaagaaban, qiyaaso badan, qiimo jaban iyo khalkhal yar oo ku yimaada nolosha bukaanka ee daaweynta hypofractionation Tijaabooyin badan oo laga sameeyay Maraykanka iyo Boqortooyada Midowday labaduba waxay muujiyeen in jajabka jajabku (4 illaa 6 toddobaad oo daaweyn ah) ay waxtar u leeyihiin sida 8 illaa 9 usbuuc oo aan sun badan u lahayn unugyada caafimaadka qaba.
Si ka duwan tikniyoolajiyadii hore, qorshaha daaweynta ayaa lagu ridi karaa kumbuyuutarka oo lagu dhammeyn karaa daqiiqado gudahood. Daaweynta kansarka qanjirka 'prostate' sidoo kale waa wax aan la faafin oo sahlan sidaa darteed bukaanku si dhaqso leh ayey ugu laaban karaan howlahooda maalmeed.
Marxaladaha Kansarka Dhirta
Marxaladda kansarka qanjirka 'prostate' waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee xulashada daaweynta. Iyada oo ku xidhan marxaladda, daaweyn isku dhafan oo qalliin ah, qanjirka 'radial prostatectomy', brachytherapy, daaweynta hormoon, kiimiko ku daaweynta iyo shucaaca ayaa laga yaabaa in loogu baahdo qaar ka mid ah burooyinka qanjirka 'prostate'. Xulashada daaweynta ayaa sidoo kale saameyn ku leh nooca kansarka qanjirka 'prostate', da'da, caafimaadka guud iyo doorbidyada shaqsiyadeed.
Marxaladda I, kansarka qanjirka 'prostate' waxaa laga helaa qanjirka 'prostate' oo keliya. Daaweynta shucaaca ee heerkulka I kansarka qanjirka 'prostate' ayaa badanaa lagu taliyaa in la yareeyo halista kansarka ku faafa, gaar ahaan kuwa qaba heerar sare Gleason iyo heerarka PSA.
Marxaladda II, kansarka qanjirka 'prostate' wuxuu aad uga horumarsan yahay marxaladda I, laakiin kuma fidin meel ka baxsan qanjirka 'prostate'. Marxaladda II waxaa loo qaybiyaa marxalado IIA (kalabar ama ka yar garac) iyo IIB (kala badh ama in ka badan oo boog ah). Heerkan kansarka qanjirka 'prostate', qalliinka iyo terabiga shucaaca labaduba waa xulasho daaweyn. Daaweynta shucaaca ayaa wali lagu talin karaa qalliinka ka dib si loo sii yareeyo halista kansarka faafinta ama soo noqoshada.
Kansarka qanjirka 'Stage III' wuxuu ku fiday meel ka baxsan lakabka sare ee qanjirka 'prostate' waxaana laga yaabaa inuu ku faafay 'sebsal vesicles'. Qalliinka iyo daaweynta shucaaca leh ee daaweynta hormoonnada ayaa ah xulashooyinka daaweynta daaweynta ee heerkan kansarka qanjirka 'prostate'. Daaweynta shucaaca ayaa wali loo baahan karaa qalitaanka ka dib si loo helo xakameyn kansar oo dheeri ah oo gudaha ah iyo tan fog.
Kansarka qanjirka 'Stage IV' ayaa laga yaabaa inuu ku faafo dhaafsiisan dheecaanka seminalka unugyada u dhow ama xubnaha, sida kaadiheysta, malawadka ama qanjidhada. Marxaladan, daaweynta jirka oo dhan oo leh daaweynta hoormoonka ama daaweynta habdhiska ayaa ah waxa ugu weyn ee daaweynta. Daaweynta maxalliga ah ee leh qalliinka ama daaweynta shucaaca ayaa loo baahan karaa si looga caawiyo xakamaynta astaamaha Daaweynta shucaaca ee loo yaqaan 'Proton radiation treatment' waxaa loo isticmaali karaa kansarka qanjirka 'prostate' ee sareeya ama kan dabayaaqadiisa si loo yareeyo burooyinka ama loo xakameeyo xanuunka.
Kansarka Dhirta ee Soo noqnoqda
Natiijooyinka Daaweynta Kansarka Dhirta Dhirta
Daaweynta daaweynta Proton ee kansarka qanjirka 'Protons Cancer Therapy Center' ee San Diego ayaa laga yaabaa inay bixiso natiijooyin la mid ah tan shucaaca-raajada, iyadoo la yareynayo saameynta mustaqbalka ee halista nolosha sida dhiig-baxa kacsiga, heerarka testosterone hoos u dhaca, kaadi-mareenka iyo futada. Dhibaatooyin, iyo cilado caloosha oo ay ugu wacan tahay dhaawaca shucaaca ku dhaca malawadka, mindhicirka iyo kaadiheysta. Waxay sidoo kale bixisaa suurtagalnimada fursadaha hoose ee kansarka sare nolosha dambe sababta oo ah yareynta soo-gaadhista shucaaca unugyada caafimaadka qaba iyo xubnaha.
Si kastaba ha noqotee, dhammaan daaweynta kansarku waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo faa'iido-darro. Hubso inaad kala hadasho dhammaan khataraha ka imaan kara, iyo sidoo kale ikhtiyaarada daweynta ee kansarka qanjirka 'prostate' ama 'kerologist'.
Daaweyntayda kama soo qaadin wax dhibaato ah oo dhinaca dawada ah. Waxaan tababaray kooxdayda ragga iyo dumarka ah ee dalal-gudeedka dhammaan daaweyntayda, anigoo aan hal maalin ka maqnayn. Waan ilaaliyay xiriirka dhow ee aan aad ugu qiimeeyo xaaskeyga, JoAnn, waxaanan wali firfircoon ahay aabbe iyo lataliye bulshada dhexdeeda ah.
Bukaanka Kansarka Qanjirka 'prostate'
Daraasadaha Cilmi-baarista ee Taageera Daaweynta Proton ee Kansarka Qanjirka 'Prostate Cancer'
1 Faa'iidooyinka joogtada ah ee kala-goynta xubinta taranka shucaaca: Natiijooyinka ugu dambeeya ee Tijaabada Wejiga III
2 Hydrogel Spacer Saadaalin Multicenter Randomized la xakameeyay Tijaabada Muhiimka ah: Dosimetric iyo Saameynta Caafimaad ee Codsiyada Xawaaraha Pirectal ee Ragga Sawirka Sawirka Kacsanaanta Hogaanka Muuqaalka Muuqaalka Tooska ah ee Daaweynta Shucaaca
3 Boqolkiiba 97 bukaannada kansarka qanjirka 'prostate' ee lagu daaweeyey dawaynta 'proton therapy' ayaan la kulmin dib u soo noqosho
4 Hoos udhaca baahsan ee shucaaca 'proton radiotherapy' ee kansarka qanjirka 'low hooseeya iyo midka dhexe' ayaan laxiririn xakamaynta testosterone-post-daaweynta ka dib.
5 Daaweynta Proton Beam The Cancer Prostate Kansarka Kansarka 101: Aasaaska, Murannada, iyo Xaqiiqda
Tayada nolosha iyo sunta ka timaadda iskaanka iyo firfircoonaanta shucaaca proton beam therapy ee kansarka qanjirka 'maxalli'
Isbarbar dhigga qiyaasta-caadiga-qiyaasta daawada sare ee daaweynta shucaaca shucuureed ee qanjirka 'adenocarcinoma' ee qanjirka '
Isbarbardhigga qiyaasta sare ee proton radiotherapy iyo brachytherapy ee kansarka qanjirka 'prostate': daraasad ku habboon xaalad
Isbarbar-dhigga qiyaasta qiyaasta daaweynta proton-ka iyo shucaaca-unugyada leh ee lagu beddelay kansarka qanjirka 'prostate'
Natiijooyinka hore ee sedexda tijaabo ee mustaqbalka ah ee daaweynta proton-ka hagida kansarka qanjirka 'prostate'
Shaqada qaladka, kaadi-kacsanaan la'aanta, iyo natiijooyinka kale ee tayada nolosha ka dib daaweynta proton ee kansarka qanjirka ragga ee 60 jir iyo kuwa ka yar
Natiijooyinka shanta sano ah ee ka soo baxa 3 tijaabooyinka saadaasha ah ee daaweynta Proton-Hagaha Proton ee kansarka qanjirka 'Prostate Cancer'
Tayada muddada-dheer ee natiijooyinka nolosha kadib proton beam monotherapy oo loogu talagalay kansarka qanjirka 'prostate'
Maareynta dhibaatooyinka ee daaweynta kansarka qanjirka 'prostate'
Natiijooyinka muddada-dheer ee bukaan-socodka ka dib markii caadiga ahayd iyo qiyaasta sare ee isku-darka ee proton iyo shucaaca photon ee kansarka qanjirka 'hore'
Natiijooyinka waxqabadka kaadi-mareenka iyo sunta ah shan sano ka dib daaweynta proton ee kansarka qanjirka 'hoose iyo dhexe': natiijooyinka laba tijaabo mustaqbalka la filayo.